Silk Fibroin akpụkpọ - China Simatech
The silk fibroin akpụkpọ ahụ na ngwaahịa na ọkpụrụkpụ na n'ibu Njirimara tailorable dị ka ndị ahịa 'chọrọ.
The silk fibroin akpụkpọ ahụ na ngwaahịa na ọkpụrụkpụ na n'ibu Njirimara tailorable dị ka ndị ahịa 'chọrọ. The membranes nwere ike kwadebere na ma ọ bụ na-enweghị pores, na pore size mgbanwe site nanometers ka micrometers, si otú kwesịrị ekwesị n'ihi na cell na omenala na ọgwụ ntọhapụ ọmụmụ.
Film ọkpụrụkpụ: 10-300 micrometers;
Nchegbu: 0.1-1 Mpa;
Ngwaahịa a bụ a ahaziri ngwaahịa. Anyị nwere ike inye usoro nke silk fibroin akpụkpọ ahụ ngwaahịa na na-enweghị pores dị ka gị na-arịọ.
Next: Silk Fibroin Ngwọta
Regenerated Silk Fibroin akpụkpọ ahụ
Regenerated Silk Fibroin Protein akpụkpọ ahụ
Regenerated Silk Protein akpụkpọ ahụ
Silk Fibroin Protein akpụkpọ ahụ
Silk Protein akpụkpọ ahụ